Black Magic: Zombies Vs Toys v.1.00.07 Mod Unlimited Blocks For Android (40.2 MB)
Zombies Vs Toys v.1.00.07 Mod Unlimited Blocks For Android (40.2 MB)
Posted by Black Magic | Posted in Android Games | Posted on 1:01 PM
ဟိုတနေ့က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် သူ့ ဖုန်းကို Root လုပ်ချင်လိ်ု့ဆိုပြီးရောက်လာတယ်..၊ Root လုပ်ပြီးတော့သူ့ Phone ထဲဘာတွေများရှိမလည်းဆိုပြီးတော့ မွှေနှောက်ရှာရင်းနဲ့ဒီဂိမ်းလေးကိုတွေ့လာတာ၊
သူကလည်း ဒီဂိမ်းလေးကိုတော်တော်ကြိုက်တယ်..၊ ဒါပေမယ့် တော်တော်ခက်တော့ မနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာ..၊
အဲဒါ ကျွန်တော်ကို ခိုးလို့ရလားဆိုပြီးတော့မေးတာနဲ့ ကျွန်တော်လည်း Game Hacker နဲ့ခိုးကြည့်တော့မရဘူး..၊ မနေ့ညကတော့ Mod Version လိုက်ရှာပြီးဒေါင်းလိုက်တယ်..၊ ကျွန်တော်တောင်မဆော့ရသေးဘူး..၊ အခု ဘော်ဒါတွေလည်းဆော့ရအောင်ဆိုပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါ..၊ Tower ထောင်တာကို ကြိုက်တဲ့ သူတွေကတော့ ဒီဂိမ်းလေးကိုလည်း ကြိုက်မှာပါ..၊ ခိုးပြီးသားကိုမဆော့ချင်ဘူး..၊ ရိုးရိုးဘဲဆော့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Play Store ကနေသွားဆွဲလိုက်ဗျာ..၊
[Download Zombies Vs Toys v1.00.07 Modded Unlimited Blocks From Shared]
[Download Zombies Vs Toys v1.00.07 Modded Unlimited Blocks From Tusfiles]
[Download Zombies Vs Toys v1.00.07 Modded Unlimited Blocks From DataCenter]
[Download Zombies Vs Toys v1.00.07 Modded Unlimited Blocks From Unlimit
App Version : v1.00.07 Modded Unlimited Blocks
v1.00.07 change the Reward ad.
v1.00.06 insertaExchanger ad.
v1.00.05 insertachartboost ad.
v1.00.04 Stabilization of the update file check
v1.00.03 The monkey Summoner skill image updates
v1.00.02 Add language tutorial (in Japanese)
v1.00.01 Challenge mode bug fix
★ More Manastone Games ★
- Toy Defender R
- World Janggi Chess 4
- World Janggi Championship
- Hero TacTics 2